မေလ 2018 | 10 ၏စာမျက်နှာ 109 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » မေ (စာမျက်နှာ 10)
မာလ်တီမီဒီယာ / ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေးအထူးကု
ရာထူး: မာလ်တီမီဒီယာ / ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေးအထူးကုကုမ္ပဏီ: IPKeys Technologies က LLC တည်နေရာ: ပင်တဂွန် DC ကအမေရိကန်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် IPKeys Technologies ကပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်မှာပူးတွဲန်ထမ်းပံ့ပိုးမှုစင်တာ (JSSC) ကိုပံ့ပိုးဖို့မာလ်တီမီဒီယာရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေးအထူးကုရှာကြံနေပါတယ်။ တာဝန်များနေဆဲစစ်တပ်နှင့်အစိုးရအမှုထမ်းများနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကဖြစ်ရပ်များ၏ပုံရိပ်များဘောင်လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်အမျိုးအစားမခွဲခြားထားသောဖမ်းဆီးဖို့ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာများနှင့်အခြားဓါတ်ပုံကိုသုံးစက်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုပါ။ အရည်အချင်းများ ...
ရာထူး: Motion ဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီ: Simantel တည်နေရာ: Peoria IL အမေရိကန်ကိုသင်သလားလိမ့်မယ်အဘယျသို့: အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုဒီဇိုင်နာအယူအဆဖို့ကို Creative ဦးစီးဌာနနှင့်အတူပူးပေါင်း, ဒီဇိုင်းနှင့်ဗီဒီယိုတာဝန်ကျ၏ကွက်ကိုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်ရွေ့လျားမှုဒီဇိုင်းကို execute အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ကိုင်တွယ် ထုတ်လွှင့် / က်ဘ်ဆိုက်အစက်အပြောက်, branded အကြောင်းအရာနှင့်ရေတိုရုပ်ရှင်များအတွက် post-ထုတ်လုပ်မှု၏ဒြပ်စင်။ သငျသညျတခုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးအယူအဆရေးရာဒီဇိုင်နာတွေဟာ ...
အဝတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း | ဂရပ်ဖစ် | ဒီဇိုင်း Internship
ရာထူး: အဝတ်အစားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း | ဂရပ်ဖစ် | ဒီဇိုင်း Internship ကုမ္ပဏီ:6တည်နေရာမှတဆင့်: ဥယျာဉ် Grove, CA အမေရိကန် **** အထူးဂရုပြုရန်: သင်ကျောင်းသားရှာ Credit မထားဘူးဆိုရင်ကျင့်သုံးပါမသွားပါ, ဤနိုင်ငံတကာရှာကြံ Orange County တွင် AN မရတဲ့ Internship POSITION *** ဒေါင်လိုက်အဝတ်အစားထုတ်လုပ်သူ IS! ဒီဇိုင်းအယူအဆအနေဖြင့်ကွပ်မျက်ရန်, အဝတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏လူအပေါင်းတို့ရှုထောင့်လေ့လာသင်ယူဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခွင့်အလမ်း။ အလုပ်အဖွဲ့ ...
ဒေတာကိုအတွေ့အကြုံ FE အင်ဂျင်နီယာချုပ် International
ရာထူး: ဒေတာများကိုအတွေ့အကြုံ FE အင်ဂျင်နီယာချုပ် International ကုမ္ပဏီ: ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြု Inc မှတည်နေရာ: Sunnyvale, CA အမေရိကန်သစ္စာကို Verizon က၏လက်အောက်ခံ, အဆောက်အဦမှကျူးလွန်နေတဲ့တန်ဖိုးများကိုဦးဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီလူမျိုးကိုချစ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ 50 + မီဒီယာနှင့်နည်းပညာအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပြောင်းလဲနေသောအိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့ကမ္ဘာတဝှမ်းဘီလီယံကိုတချက်ကလူရောက်ရှိဖို့။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်မိုဘိုင်းကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များ၏အနာဂတ်ပုံဖော်နေသည် ...
ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့ - မေလ 30, 2018 -TVU ကွန်ယက်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေါင်းဆောင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ IP ကိုဗီဒီယိုကဖြေရှင်းချက်ထဲမှာစနေနေ့ 19 မေလပေါ်တွင်မင်းသားဟယ်ရီနှင့် Meghan Markle ၏မင်္ဂလာဆောင်၎င်း၏လွှမ်းခြုံကူညီပံ့ပိုးရန်ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားကရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ ပြင်သစ်2ထုတ်လွှင့်, တီဗီနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် franceinfo, အထူး Mariage Princier အမည်ရ program ကိုတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကို TVU ကွန်ရက်ဖြေရှင်းနည်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်း ...
အကြီးတန်းဆက်သွယ်ရေး Voice ကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်
ရာထူး: အကြီးတန်းဆက်သွယ်ရေး Voice ကိုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Marvell တည်နေရာ: Santa Clara, CA အမေရိကန်ကျနော်တို့ထက်သာလွန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူချိတ်ဆက်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မှနည်းပညာကို အသုံးပြု. များအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူညျ့ဝဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကျွမ်းကျင်သူရှာဖွေနေပါတယ်။ အဆိုပါအတွေ့အကြုံ၏ Sr; မန်နေဂျာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားန်ဆောင်မှုများပေးရန်အစီရင်ခံ, သင်အလွန်အမင်းမရရှိနိုင်အသံနှင့်ဗီဒီယိုကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်လိမ့်မယ် ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုခဲကုမ္ပဏီ: AV စနစ်ချီကာဂိုတည်နေရာ: ချီကာဂို IL အမေရိကန် AV စနစ်ချီကာဂို / Edge ShowTek full-service ကိုထုတ်လုပ်မှု, ငှားရမ်းခြင်းနှင့် staging ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကဗီဒီယိုခဲအနေအထားတစ်ခုအတွေ့အကြုံရှိဗီဒီယိုကအင်ဂျင်နီယာရှာကြသည်။ ဒီအနေအထားချီကာဂို, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပေမယ့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လွှားခရီးသွားလာမှုပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကို LED ကဗီဒီယိုပြသမှုအားပရိုဂျက်နှင့် Multi-output ကိုအတူလုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း ...
10 ၏စာမျက်နှာ 109«ပထမဦးစွာ...«89101112 » 203040...နောက်ဆုံး»